ठूला आयोजनामा किन पटकौं पटक अवरोध खेप्नु पर्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ठूला आयोजनामा किन पटकौं पटक अवरोध खेप्नु पर्छ ?
साउन ५ गते, २०७६ - ०९:०७
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाको संख्यामा पर्वतमा मात्रै दर्जनभन्दा बढी छ । सरकारी नीतिमा त्यस्ता आयोजनाको काममा कुनै खालको अवरोध नगर्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ भने ठूला आयोजनाले पटकौं पटकको अवरोध खैप्दै आएका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – असार मसान्तसम्म पर्वत खण्डको ७० प्रतिशत काम सक्ने योजना बनाएको मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति ५० प्रतिशत पनि पुगेन । ०७१ संसिरमा सुरु भई २०७५ असार मसान्तभित्र उत्पादन दिने योजनासहित अघि बढेको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगती पनि ७० प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।
०७३ असोजमा सुरु भएर २८ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको कालीगण्डकी प्रसाण करिडोर आयोजनाको काम अझै ७० प्रतिशत कट्न सकेकोछैन ।
साउन ५ गते, २०७६ - ०९:०७ मा प्रकाशित